LUNGRAWK BAK SI. RALHRANG TON AN TIMHNAK HNA BIATHLI A CHUAK – The Chinlung Post
LUNGRAWK BAK SI. RALHRANG TON AN TIMHNAK HNA BIATHLI A CHUAK
May 28, 2021 admin Kawlram 0
PPST Nih Ralhrang Khawngsil He Biaruah An I Timhnak Biathli Aa Puang Ai. NCA ah hnatlaknak minathumi tlangcung hriamtlaibu 10 hna nih dirhmi Peace Process Steering Team nih ralhrang khawngsil he biaruah an i timhnak biathliapuang tiah theihasi. Cu biathli cu PPST nih May 28 ah ralhrang khawngsil nihasermi remdaihnak tuahtu bu hotu Bochohci Ya Pyih sinah an tialmiasi.
NCA kongkau tiasi. Ralhrang khawngsil remdaihnak tuahtu bu hotu aiawh in Bochohci Min Nawng nih minthut in May 19 ahakan kuatmi ca kan hmuh, SAC nih NCA hnatlaknak kan cohlan lai nan ti caah kan i lawm, tiin bia an thok. An ca chungah cun atu lioacang cuahmahmi ramchung buainak hi SAC ca zongah siseh, tlangcung hriamtlaibu hna caah siseh,
Ramkhel party le mip ca zongah siseh, aho ca hmanh ah hlawknakaum lonak le ramkhel boaruakadaih deuh poah ahathat chinchin nak kong an tial.Myanmar buainak ruangah ram cheukhat nih timhmi ngei tein an i thlakmi an duhlonak le an i thlakmi khamnak dingah cun kanmah he kutlaih inatuan khotu ding rammi hna kha zulhphung le rikhiahmi chungin sawmnak tuah i tuanti khaatha bikmiasi tiah PPST nih an ruahnak an tialchih fawn.
Cu ruangah SAC le PPST cuarannak in i ton i biaruahnak ngeih ding le PPST nih cathanh chuah an i timhnak kong zong an ca chungah cun an tial.Hi ca hi mipi nih tuahmi Spring Revolution zeirello, hnuchitasi tiah min chimaduh lomi tlangcung hriamtlaibu hruaitu pakhat nihachim. Hi ca hi zeibantuk bu le aho hruainak in tialasi ti an langhter lo i PPST ah aa telmi hriamtlaibu 10, an dihlak lungtlin in an tialmi mawasi ti zong theihasi rih lo. TCP
Kawlca In: စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ PPST ကမ်းလှမ်းတဲ့စာ ထွက်ပေါ်လာ , NCA အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အဖွဲ့ (PPST) က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ လျှို့ဝှက်စာမူကြမ်းကို ဒီနေ့ မေလ ၂၈ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ RFA ကလက်ခံရရှိထားတဲ့ အဲဒီစာမူကြမ်းမှာ… စစ်ကောင်စီက တာဝန်ပေးထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်ကို လိပ်မူထားပြီး၊ အကြောင်းအရာမှာ NCA ကိစ္စလို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်စား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်က လက်မှတ်ထိုးပြီး မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကို မိမိတို့ EAO အဖွဲ့တွေက လက်ခံရရှိပြီး၊ တပ်မတော်က NCA စာချုပ်ကို လက်ခံမယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်း အစချီ ရေးထားပါတယ်။ အချက် (၇) ချက်ပါတဲ့ ဒီလျှို့ဝှက်စာထဲမှာ … လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်း အခြေအနေတွေဟာ တပ်မတော်ရော၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေရော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော၊ ပြည်သူအတွက်ရော ဘယ်သူ့ အတွက်မှ အကျိုးမရှိ တဲ့အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လေ ကောင်းလေလို့ ဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့နိုင်ငံတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်စွက်ဖက်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုထားသလို၊ ဒီလို စွက်ဖက်တာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မိမိတို့နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နိုင်ငံသားတွေကို စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဘောင်တွေထဲကနေ ဖိတ်ခေါ် လက်တွဲတဲ့နည်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့အယူအဆကို ရေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်နဲ့ PPST အဖွဲ့ အမြန်ဆုံးတွေ့ပြီး အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ PPST ပူးတွဲကြေညာချက်မူကြမ်း ထုတ်ဖို့လည်း စီစဉ်နေတယ်လို့ စာထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
အခုစာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို သစ္စာဖောက်တဲ့လုပ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ ဒီစာကို ဘယ်အဖွဲ့၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်ရေးသား ပေးပို့တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြမထားသလို၊ ဒီစာကို PPST မှာပါတဲ့ ၁၀ ဖွဲ့လုံးက သဘောတူသလား ဆိုတာကိုလည်း လောလောဆယ် မသိရသေးပါဘူး။ KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုးက NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ မေလ ၉ ရက်နေ့က ရေးသားထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီအပေါ်မှာ လက်ရှိပြည်သူတွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ KNU အဖွဲ့တွေနဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ပါတယ်။
REV.DR. ZA HLUN THANG TE SIANGINN RALHRANG NIH AN LUH HNAWH HNA
GOOD NEWS: THAW A HUNG CHUAK DEUH, CNF/A AN I TEL LO